Trano fitaratra tubular, ny hevitra tsara ananan'ity mpanao mari-trano Tiorka ity | Famoronana an-tserasera
Ny firafitra amin'ny maritrano dia mendrika antsika amin'ny maha- loharanom-tsindrimandry lehibe. Rehefa misy tontolo vaovao heverina, misy planeta hafa na iray manandrana mitady ny ho avy, misy mpanao mari-trano sasany izay manampy antsika hamolavola izany fiaviana izany amin'ny taona 2100.
Ny mpanao mari-trano Aibek Almassov dia iray azontsika jerena mba hamoronana hevitra mamorona hananganana ny tranon'ilay maherifo vaovao noforoninay na ny fanaovana tanàna an-tanàn-dehibe miaraka amina endrika manokana izay hanakambananay fianakaviana maro hitoerana ao anaty tantara an-tsary. Tsy haiko, hevitra izy ireo amin'ny faran'ny andro sy ny Ny trano fantsona Amassov dia tena tany am-boalohanyl sy fototra ho an'ity fidirana ity.
Ie fantatro ny trano mihitsy no mamorona sy mahira-tsainaMiaraka amin'io endrika fantsona io, ny fametrahana azy eo afovoan'ny ala dia hevitra adala hafa. Natao tamin'ny taona 2013 ary tsy misy fanohanana ara-bola hahafahana mametraka azy io amin'ny toerana lavorary nofinofisin'ilay mpanao mari-trano ihany, amin'ny farany dia mety ho lasa iray azontsika tsidihina raha mijanona eo isika.
Ary izy io dia misy orinasa maromaro manamboatra kristaly sy valin'ny masoandro ireo izay naneho fahalianana manokana amin'ny famatsiambola azy. Ny hevi-dehibe amin'ny tetik'asa, araka ny tenin'i Almassov manokana, dia ny manolotra safidy hafa ho an'ny korontana ao an-tanàna. Atambaro izay famolavolana indostrialy sy maoderina miaraka amin'ny hatsarana sy haren'ny voajanahary sy ny ambanivohitra. Ny fivoahana ny volondavenona sy ny beton ary ny vy no tena tanjon'ity trano miendrika fantsona ity ary rakotra vera.
Na eo afovoan'ny trano anananao aza hazo toy ny axis afovoany ho an'ny efi-trano rehetra sy ireo fomba fijery mahafinaritra azonao atao amin'ny fipetrahana milay. Satria mijanona amin'ny endrika izy io, antenainay fa afaka miverina manaraka ireto andalana ireto ianao amin'ny maha zava-misy azy io, satria toa tsy mora ny nanatanteraka an'io tetikasa io.
Ireo izay nahomby, fa amin'ny endrika endrika hafa, dia ny mpamorona ireo jiro ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Trano miendrika fantsona naorina eo afovoan'ny ala